tantara | Ningbo Care Medical Instruments Co., Ltd.
Fananganana ny orinasa
Tao amin'ity efitrano birao nohofana ity, Chandler Zhang dia nanomboka ny tanjon'ny orinasa Ningbo Care Medical Instruments Co., Ltd. tamin'ny 11 Jolay, niaraka tamin'ny varotra maodely ara-pitsaboana sy ny fihinana fanafody.
Fampanantenan'ny governemanta Curitiba (Brezila)
Nandray anjara tamin'ny tolo-kevitry ny governemanta tao Curitiba modely ara-pahasalamana ho an'ny laboratoara am-pianarana sy ireo vokatra ho an'ny hopitaly.
Mba hanompoana ny mpanjifa tsaratsara kokoa sy hahazoana kaomandy fividianana entana betsaka dia nanapa-kevitra i Chandler fa hividy birao ao amin'ny South Business District ao Ningbo.
Fananganana ny ekipan'ny famokarana
Mba hanomezana vokatra avo lenta amin'ny vidiny mirary sy hanompoana ny mpanjifanay dia nanangana ekipa mpamokatra izahay.
Manao tolotra miaraka amin'i Filipina
Tsy nahy ny ekipanay dia nanam-potoana hamatsy entana ny Governemanta Filipiana ary nahazo ny valiny avo indrindra taorian'ny ezaka nandritra ny taona maro.
Famindrana toerana an'ny orinasa
Mba hamaly ny filan'ny mpanjifanay sy ny fampandrosoana ny orinasa dia nifindra tamina orinasa vaovao izahay ary nihatsara ny fahombiazany.
Fananganana ny ozinina
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa, ny orinasa nanofa dia tsy afaka mamaly ny filan'ny famokarana sy ny fitantanana, nanangana orinasa izahay miaraka amin'ny trano misy birao, izay nampiasaina tamin'ny taona 2019.
Taona manokana ho an'ny firenena rehetra ny 2020 noho ny COVID-19. Tamin'ity taona ity dia nanao ezaka be izahay mba hanomezana fitaovam-pitsaboana sy fitaovam-piarovana ara-pahasalamana manerantany, na dia miasa mafy amin'ny governemanta aza izahay mba hamorona fantsona fizarana tsara kokoa ho an'ny mpanjifanay.